2021 zom-pirenen'i Saint Kitts sy Nevis
Ny hakanton'ny voajanahary sy ny fasika amoron-dranomasina fotsy any Saint Kitts sy Nevis dia tena mahavariana sy toerana mahafinaritra any Karaiba.
Ny toetr'andro tropikaly amin'ireto nosy sicika ireto, ny rano madio dia manintona ny mpizahatany ary mampiroborobo ny fivoaran'ny asa fizahan-tany. Saint Kitts sy Nevis dia miara-miasa amin'ny sidina mivantana avy any Eropa sy Etazonia, noho izany ny maha any amin'ireo nosy ireo dia manome tombony manokana ireo mpangataka amin'ny zom-pirenena.
fahazoana zom-pirenena ao anatin'ny fe-potoana tsy mihoatra ny 2 volana;
ny zo hahazo zom-pirenena ho an'ny ankizy latsaky ny 30 taona, ny ray aman-dreny mihoatra ny 65 taona;
tsy misy fepetra takiana amin'ny ipetrahana ao amin'ny firenena;
tsy fisian'ny fepetra takiana amin'ny fanatrehany manokana rehefa mangataka fangatahana;
tsy misy adidy mangataka visa hiditra amin'ny faritanin'ny firenena 155, ao anatin'izany ny faritr'i Schengen, Great Britain, Hong Kong, Singapore;
fanavotana amin'ny haba amin'ny endrika vola miditra manerantany;
fisoratana anarana ny antontan-taratasy ofisialy (pasipaoro) Saint Kitts sy Nevis ao anatin'ny fe-potoana tsy mihoatra ny 2 volana.
Fomba ahazoana zom-pirenen'i Saint Kitts sy Nevis:
1. Hetsika fampiasam-bola amin'ny alàlan'ny fandraisana anjara amin'ny Tahiry ho fanampiana ireo olona tra-boina tamin'ny rivodoza - ny toetran'ny fandraisana anjara tsy azo averina:
150 XNUMX $ - ho an'ny mpangataka mivantana;
150 3 $ - ho an'ny fianakaviana misy olona 2 (vady na vady ampiana zaza 18 latsaky ny XNUMX taona);
$ 25 arivo - ho an'ny olona manaraka fikarakarana.
2. Fampiasam-bola amin'ny famatsiam-bola (SIDF) - toetran'ny fandraisana anjara tsy azo averina.
250 XNUMX $ - ho an'ny mpangataka mivantana;
300 3 $ - ho an'ny mpangataka fototra miampy XNUMX miankina aminy;
$ 25 arivo - ho an'ny mpikarakara manaraka.
3. Tany sy trano
Ny vidin'ny fividianana trano dia tsy maintsy 400 XNUMX $ farafaharatsiny. Ny fananan-trano dia tsy maintsy ananana mandritra ny dimy taona farafahakeliny, mandoa hetra koa ny olona mampiasa vola amin'ny trano.
7 $ 500 - ho an'ny mpangataka lehibe;
4 $ - ho an'ny olona miankina amin'ny farafaharatsiny 16 taona.
Ny fandoavam-bola amin'ny endrika saram-panjakana (amin'ny fahazoana trano sy tany):
35 $ - ho an'ny mpangataka fototra, 047 taona farafahakeliny miankina;
20 $ - ho an'ny vady na vady;
10 $ - ho an'ny fiankinan-doha fanampiny.
Citizenship Saint Kitts sy Nevis ENG
Zom-pirenen'i Saint Kitts sy Nevis RUS